Ogwe osisi a pịrị apị
Ogwe mmanụ abụ
I maromi marble panel
Ogwe nka nka
Ogwe nbipụta UV
Mmepe ngwa ngwa nke aluminom panel
Na mba anyị, ngwaahịa ụlọ aluminom na -amalite n'oge na -adịghị anya, mana na mba ndị mepere emepe, ogidi mgbidi aluminom nwere ọtụtụ iri afọ nke akụkọ ntolite. Site na mmepe nke mgbanwe na imeghe, China nwere mmepe ngwa ngwa na aluminom ...
Uru nke aluminom siri ike ogwe
site na nchịkwa na 21-06-10
Site na ntọala aluminom siri ike na -eguzogide corrosion na nguzogide ihu igwe, na -eguzogide mmiri ozuzo acid, nnu nnu na ụdị mmetọ ikuku niile, okpomọkụ na nguzogide oyi siri ezigbo ike, nwere ike iguzogide radieshon ultraviolet siri ike, nwere ike idobe ogologo ma ghara ịla n'iyi, ọ bụghị iwepu. , ogologo ọrụ ...
Onye isi obodo nke Dingxi City, Gansu Province Dai Chao gara ụlọ ọrụ anyị ka anyị kwuo ma kwalite ọrụ imekọ ihe ọnụ nke ihe mkpuchi ihe mkpuchi ụlọ aluminom.
Onye isi obodo nke Dingxi City, Gansu Province Dai Chao gara ụlọ ọrụ anyị ka anyị kwurịta ma kwalite ọrụ nkwado nke ihe ịchọ mma ụlọ mkpuchi aluminom。 Na 1 Septemba 2020, Dai Chao, osote odeakwụkwọ nke Kọmitii Party nke Obodo na onye isi obodo Foshan City, nyochara. Guangd ...
site na nchịkwa na 21-03-24
Guangzhou Infinitus Plaza dị na Baiyun New Town, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province. Ọ bụ onye ama ama ama ama ama ama ama n'ụwa, onye akpọrọ "Queen of curves"-Zaha Hadid chepụtara ya. Infinitu ...
Ọdịdị nke ogwe aluminom 1. Ibu dị arọ, ịdị elu siri ike na ike. 2. Ezi nguzogide ihu igwe na ihe mgbochi corrosiveness. 3. Enwere ike ịhazi ya n'ụdị siri ike. 4. Otutu agba ka ịhọrọ. 5. Ọ dị mfe ihicha ...
Ụlọ ọrụ: Foshan City Nanhai Yingjiwei Aluminium Building Materials Co., Ltd.
Okwu: Mba 1, Hejing South Road, Phase 1, Hegui Ind. Mpaghara, Heshun, Lishui Town, Nanhai Dist., Foshan, Guangdong, China
Copyright - 2010-2021: Ikike niile echekwabara. Ngwaahịa apụta, Map saịtị, Architectural Facades Ltd., Ihu mkpuchi ihu nke Aluminom, Gwara mmanụ Aluminium ogwe, Aluminom Soffit owuwu ụzọ mbata ụlọ, Ogwe ngere nke Aluminom, Ihuenyo ihu ihe owuwu ụlọ, Ngwaahịa niile